လက်သည်းကိုထိခိုက်စေကြောင်း သတိမပြုမိတတ်သည့် နေ့စဉ်ဘဝအလေ့အထ(၇)ခု - ONE DAILY MEDIA
လက်သည်းကိုထိခိုက်စေကြောင်း သတိမပြုမိတတ်သည့် နေ့စဉ်ဘဝအလေ့အထ(၇)ခု
တော်ဝင်မင်းသမီးများကို တိုတိုနှင့်သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သောလက်သည်းများသာခွင့်ပြုသောကြောင့် Kate Middletonဟာ သူမ၏ တောက်ပသောလက်သည်းများကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော် အမျိုးသမီးအများစုကတော့ ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ သူတို့ရဲ့လက်သည်းပေါ်မှာလက်ရှိခေတ်စားတဲ့ စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းနှင့် အရောင်ခြယ်ဖို့အတွက် ကျန်းမာလှပတဲ့လက်သည်းတွေရှိကြပါတယ်။ တကယ်တော့လက်သည်းတွေဟာ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုဖော်ပြနိုင်ပါတယ် ၊ သင့်ကိုယ့်သင်တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှု ကောင်းကောင်း ရှိမရှိကို သင့်ရဲ့လက်သည်းတွေက ဖော်ပြနေပါလိမ့်မယ်။
လက်သည်းမလှပတဲ့နေ့ရက်များက သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်၊ ထို့ကြောင့်လက်သည်းတွေကို မည်သည့်အရာတွေ ၊ မည်သည့်အလေ့အထတွေကလျှို့ဝှက်စွာပျက်စီးစေနိုင်နေမလဲဆိုတာကို သုတေသနလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
(၁) ဆံပင်ဖြန်းဆေးများ မကြာခဏ အသုံးပြုခြင်း
သင်ဟာ ဆံပင်မှုတ်ဆေးသုံးသူတစ်ယောက်ဆိုရင် သင်သတိမပြုမိလိုက်ဘဲ လက်သည်းတွေကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်ဖြန်းဆေးတွေမှာအရက်ပြန် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါ ၀င်တာမို့လက်သည်း‌ တွေကို ခြောက်သွေ့ ကြွပ်ဆတ်စေနိုင်ပါတယ်။ဆံပင်ဖြန်းဆေးဟာ သင့်အသွင်အပြင်ကို တမျိုးဆန်းစေနိုင်သော်လည်းလက်သည်းကိုတော့ ထိခိုက်စေပါတယ်။ဆံပင်ဖြန်းဆေးများသည် လက်သည်းဆိုးဆေးကိုပျက်ပြယ်နိုင်စေသောကြောင့် သင့်အဝတ်မှလက်သည်းအရောင်အစွန်းများကို ဖယ်ရှားရန်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။
(၂) လက်သည်းခွံများကို ကိရိယာတစ်ခုသဖွယ်အသုံးချမိနေခြင်း
လက်သည်းတွေကို ဆော်ဒါဘူးခွံတွေဖွင့်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် စျေးစတစ်ကာတွေကိုအခါအားလျော်စွာခြစ်ကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်လုပ်နေရင် လက်သည်းတွေကို သူတို့ ခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ အတိုင်းအတာထက် ပိုဖိအားပေးမိလာ‌စေပါတယ်။ မရည်ရွယ်ဘဲ အမှတ်တမဲ့ လုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေအတွက် လက်သည်းတွေကိုသုံးနေမိရာကနေ ဒဏ်ဖြစ်စေပြီး လက်သည်းတွေကိုတောင်ကွဲစေနိုင်ပါတယ်။
လက်သည်းပန်းကုံးများက လက်သည်းတွေကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ကြာရှည်လတ်ဆတ်နေစေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောကြပေမယ့်လည်း ၎င်းဟာသင့်ရဲ့လက်သည်းတွေကိုရောဂါပိုးများရန်ကနေ ကာကွယ်ပါတယ်။ သင် လက်သည်းပန်းကုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်လျှင် လက်သည်းများက ပိုးမွှားများနှင့်ဘက်တီးရီးယားများကို ခုခံနိုင်စွမ်းကျလာပြီး လက်သည်းပိုးဝင်ခြင်းရောဂါများကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လက်သည်းပန်းကုံးတွေကိုဖယ်ရှားမယ့်အစား ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့တိုင်ပင်ပြီး လျော့ရဲနေတဲ့အသားအရေကိုသာ ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။
လက်သည်းရှည်ရှိခြင်းဖြင့် လှပဆန်းသစ်သော ဒီဇိုင်းများကို စမ်းသပ်နိုင်မည်မှာ မှန်သော်လည်းလက်သည်းများကိုတိုတိုထားခြင်းက ကျန်းကျန်းမာရေးနဲ့ပိုညီညွတ်ပါတယ်။ လက်သည်းရှည်များဟာ အညစ်အကြေးများနှင့်ဘက်တီးရီးယားများကိုအလွယ်တကူသယ်ဆောင်နိုင်ပြီးရောဂါပိုးများပြန့်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ထို့အပြင်လက်သည်းခွံအတုများသည်လည်း သင်၏လက်သည်းများကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ လက်သည်းများကို စေးကပ်စေသော acrylic က မူလလက်သည်းခွံများကို ပါးလွှာပြီးအားနည်းစေပါတယ်။
တပိုင်းတစ ပျက်စီးလာတဲ့လက်သည်းဆိုးဆေးတွေဟာ သင့်ရဲ့လက်သည်းတွေကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေကဲ့သို့ပင် လက်သည်းတွေကလည်း သူတို့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို ၀ င်လာတဲ့အရာတွေကိုစုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်သည်းများကို ခေတ္တအနားပေးရန် လက်သည်းဆိုးဆေးမပါဘဲ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာအောင်ဖယ်ရှားထားပါ။
မတော်သောဖိနပ်ဆိုဒ်ကို၀တ်ခြင်းဟာ လူကိုမသက်မသာဖြစ်ရုံသာမက သင်၏ခြေသည်းများကိုဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ် ။ ဖိနပ်ဟာ ခြေသည်းများပေါ်တွင် ဖိသိပ်နေလျှင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာကိုဖြစ်စေနိုင်ပြီး ခြေသည်းကွာခြင်းမျိုးပက် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ။ ဤအခြေအနေများမှရှောင်ရှားရန် သင့်တော်မှန်ကန်မှုရှိသောဖိနပ်ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။
ကလိုရင်းဟာ ရေကူးကန်၌ပိုးမွှားများနှင့်ဘက်တီးရီးယားများမှ ကာကွယ်ပေးသော်လည်းလက်သည်းများကိုအလွန်ခြောက်သွေ့စေပါတယ်။သင်ဟာရေကူးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးရေကူးကန်မှာနာရီပေါင်းများစွာကြာအောင်နေလိုတယ်ဆိုရင် သူတို့ကိုအစိုဓာတ်မဆုံးရှုံးအောင်လက်သည်းမာကျောစေတဲ့ကြည်လင်တဲ့လက်သည်းဆိုးဆေး တစ်ထပ်ကိုသေချာလိမ်းထားသင့်ပါတယ်။
ဒီအလေ့အထတွေဟာ သင့်ရဲ့လက်သည်းတွေကိုထိခိုက်တယ်ဆိုတာသင်သတိထားမိရဲ့လား ??
ခရီးသွားဧည့်သည်များ ဂရုပြုသင့်တဲ့ နိုင်ငံတကာမှ ထူးဆန်းသော ဥပဒေ(၁၀)မျိုး
နေ့စဉ်လုပ်ငန်းခွင်၏အခြားတစ်ဖက်ပုံ (၂၀) ပုံ
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်ဆွဲဆောင်မှုများ၏ နောက်ကွယ်မှ ဆိုးကျိုး (၁၀) ချက်
Oct 25, 2021 One Daily Media
ခေတ်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲလာသော နေ့စဉ်သုံး အသုံးအဆောင် (၁၃) မျိုး၏ မူလအစပုံစံများ
ရင်သပ်ရှူမောဖွယ်ရှုခင်း ရောင်စုံပန်းထိုးများကို ဖန်တီးသည့် ပန်းချီပန်းထိုးဆရာမတစ်ဦး
Which one of the above fashion and beauty trends do you think was the most savage and painful for women and men? Please tell us what you think down in the comment section.